BOMBs Teny malagasy | Hevitra MPANOHARIANA
Araraoty hatrany raha azo atao ny mibolongana Rajentl fa raha sendra misy mpanolo-tsaina mivika toa ahy ( http://shadow-gasy.blogspot.com/2008/01/dictatorship-for-dummies.html ) manodidina ny mpitondra mety tsy hisy intsony izany bolongana izany.
Vazivazy eo ihany fa fiarahabana no atolotra ary indrindra fankaherezana mba hitohy hatrany ny famakafakana ataonao sy fitantarana en live.
Nampidirin'i Shadow @ 09:01, 2008-01-21 [Valio]
arahabaina izany jentilisa a ! Maromaroa ny taona mbola hifanesy handrombahanao ny amboara.
Nampidirin'i ikalamako @ 09:38, 2008-01-21 [Valio]
Misaotra amin'ny fankasitrahana. Tsy tafiditra anaty ny lisitry ny mpifaninana intsony aho ka! ny ho mpitsara angamba sisa no azo atao.
Shadow> efa hitako tokoa io lahatsoratrao io sady mpamaky ny bolongatsoratrao hatramin'ny ela rahateo aho. Tsy mivika izany ianao ka! Be fandinihana no izy.
Nampidirin'i jentilisa @ 09:58, 2008-01-21 [Valio]
Raha mivika aloha tsy misy ohatra ahy e!
Ny fiaingan'ilay valin-teny koa toa kabarina mpanao politika vita fifidianana. Misaotra izay nifidy sy izay tsy nifidy fa efa lany aho izao ka dia @ fifidianana manaraka indray mifanambitamby fa aza elingelenina aho aloha mandritra ny mandat fa tsy afaka mampandroso an'ilay "Madagasikarako".
Dia ianareo lany izany baomba be fa izahay tsy nirotsaka hofidiana sy nirotsaka kanefa tsy lany izany pétard?
Eh, vazivazy daholo sô misy maka lagy eo ndray...
Nampidirin'i DontoMG @ 11:44, 2008-01-21 [Valio]
Dia kompilemainty izany hoy ny italiana e
Mazotoa hatrany fa harena ny fahaiza-mizara!
Nampidirin'i Harilova @ 13:29, 2008-01-21 [Valio]
dia miarahaba ny jentilisa e!
mahereza hatrany ary ny hapivelatra ny teny malagasy ny tanjona hatrany
Nampidirin'i news2dago @ 15:11, 2008-01-21 [Valio]
Arahabaina i Jentilisa.
Sady misotra amin'izay efa vitanao amin'ny ampifivelarana ny teny malagasy.
Nampidirin'i Lova @ 16:41, 2008-01-21 [Valio]
Manantitra ny fisaorana antsika rehetra e! Ho an'ireo saiky nandrombaka ny loka dia mahereza fa vao santatra ambavarano iny. Anareo izao ny manetsa be e...
Nampidirin'i jentilisa @ 17:12, 2008-01-21 [Valio]
Dia miarahaba anao ,Jentilisa, noho ny asa vitanao amin'ny fitandroana ny teny malagasy àry noho ny loka izay manambara fa tsy zava-poana sanatria ny asa vita.
Mampanantena anao aho fa hamaky sy hankafy ny lahatsoratrao eto isan-kerinandro.
Nampidirin'i Laza @ 19:02, 2008-01-21 [Valio]
Miarahaba an'i Jentilisa koa ny tenako.
Ary dia makasitraka hatrany , na ny fitsikerana ny fitondrana na ny toy izany aza , sy mirary soa an-draJentilisa e!!!
Nampidirin'i Kitana @ 20:10, 2008-01-21 [Valio]
arahabaina ee :)
tsara fa tohizo, indrindra ilay vaovao directa ;-)
Nampidirin'i simp @ 23:36, 2008-01-21 [Valio]